पाँच वर्षमै सन्तान जन्माउने विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरकी आमा - Web Tv Khabar
पाँच वर्षमै सन्तान जन्माउने विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरकी आमा
बैशाख ६, २०७८ सोमवार १४:४२ बजे
काठमाडाैं । लिना मार्सेला मेदिना विश्वको सबैभन्दा कम उमेरकी आमा हुन् । उनले पाँच वर्ष सात महिना २१ दिनको उमेरमा पहिलो सन्तानको रुपमा छोरालाई जन्म दिइन् । लिना सन् १९३३ सेप्टेम्बर २३ मा पेरुमा जन्मिएकी थिइन् । उनको परिवार सामान्य थियो, आमा भिक्टोरिया लोसेया गृहणी थिइन्, उनका बुबा तिवुरेलो मेटिना चाँदिका गहना बनाउने काम गर्थे ।
पाँच वर्ष ६ महिनाको हुँदा उनका परिवारले लिनाको पेट असामान्य तरिकाले ठूलो भएको देखे । उनीहरुले त्यसवेला पेट ट्युमरले ठूलो भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए, तर पछि डा. जेराडो लोजाडाले लिना सात महिनाको गर्भवती भएको बताए । सुरुमा उनका अभिभावकले त्यो उमेरमा लिना गर्भवती हुन सक्ने अनुमान पनि गर्न सकेनन् र डाक्टरलाई नै मूर्ख भने । त्यसपछि उनीहरुले लिनालाई वास्तविक रोगको पहिचान गर्न भन्दै विशेषज्ञकोमा लिएर गए ।
पाँच वर्ष ६ महिनाको हुँदा उनका परिवारले लिनाको पेट असामान्य तरिकाले ठूलो भएको देखे । उनीहरुले त्यसवेला पेट ट्युमरले ठूलो भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए, तर पछि डा. जेराडो लोजाडाले लिना सात महिनाको गर्भवती भएको बताए ।
यस्तो अकल्पनीय घटनापछि डाक्टरले तुरुन्तै प्रहरी बोलाएर पहिलो संदिग्धका रुपमा लिनाका बुवालाई पक्राउ गरे । एक साताको सोधपुछमा कुनै प्रमाण हात नलागेपछि प्रहरीले लिनाका बुबा तिवुरेलोलाई रिहा गर्यो । अर्का संदिग्ध लिनाकै आफन्त, जो मानसिक समस्यासँग जुधिरहेका थिए, उनलाई प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो । तर, प्रमाण अभावमा लिनाको बच्चाको बुवाका रुपमा उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन प्रहरीले सकेन ।
लिना र उनकाे छाेरा जेराडाे
पुनः प्रहरी अधिकारीहरुले आमाको उपस्थितिमा उनलाई कसैले चोट पुर्याउने वा बलात्कार गरेको याद छ कि भनेर लिनाबाट केही प्रश्नको उत्तर पाउने प्रयास गरे । यसपटक पनि प्रहरीले कुनै सम्भावित शंकास्पद व्यक्ति फेला पार्न सकेन । प्रमाणको अभावका कारण प्रहरीले उक्त मुद्दा बन्द गर्यो ।
सन् १९९५ मा लिनाबारे लेखिएको लेखमा लेखक लुइस लियोनले पेरुका दुर्गम गाउँहरुमा धेरैले धार्मिक उत्सवहरुको आयोजना गरेर लिनाजस्तै उमेरका साना बालबालिकासँग सामूहिक शारीरिक सम्पर्क राख्ने वा बलात्कारसम्म गर्ने उल्लेख गरेका छन् । लिनाको मुद्दामा प्रमाण एवं विश्वसनीय सिद्धान्तको अभावमा उनी त्यस्तै अनौठो उत्सवमा बलात्कृत भएको विश्वास गरिन्छ ।
प्रजनन तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी चिकित्सकहरुलाई लिनाको छोरामा धेरै समस्याहरु आउन सक्छ भन्ने थाहा थियो । उनको अविकसित शारीरिक अवस्थाका कारण नौ महिनासम्मको गर्भावस्थामा पनि पोषिलो आहारा प्रदान गरिएन । यसका बावजुद पनि सन् १९३९ मे १४ मा बच्चा २.७ किलोग्राम वजनसहित स्वस्थ्य जन्मियो ।
उनको कलिलो उमेर एवं प्रजननका लागि अयोग्य शारीरिक संरचनाका कारण उनको शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालियो । यसले लिनाको जीवन नै खतरामा थियो । लिना ८ महिनाको गर्भवती हुँदा मिडियाको प्रेसरले उनकी आमाले लिना तीन वर्षको उमेरदेखि महिनावारी भएको बताएकी थिइन् । तर पछि विशेषज्ञहरुले लिनाको प्रजनन अंगहरु अत्यन्तै कलिलो उमेरमा विकसित भएको पत्ता लगाए । गुप्त रुपमा विकास भएको ग्रन्थी र असामान्य रुपमा काम गरिरहेको हर्मोनका कारण लिनाले यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको चिकित्सकले बताएका थिए । र पनि यस अवस्थाको वास्तविक कारण अझै पत्ता लागेको छैन ।
बच्चाको नाम लिनाको प्रसव पीडामा सहयोग पुर्याउने चिकित्सकको नामबाट प्रेरित भएर जेराडो मेदिना राखियो । बच्चाको बुवाबारे पहिचान अझै पनि रहस्यमै छ । अर्को कुरा के निश्चित छ भने, यस घटनापछि पनि लिनाजस्तै कलिला कुनै बालिका यस्तै दुर्घटनाको शिकार भए र आजसम्म पनि भइरहेका छन् ।
दुवै आमा छोरा बढ्दै जाँदा लिनाका अभिभावकले उनी र उनीहरुको नातिलाई सामान्य बाल्यावस्थाकै रुपमा हुर्काए । लिनाका बुवाआमाले उनको यस्तो अवस्थालाई कहिले पनि असामान्य रुपमा लिएनन् । धेरै अनुसन्धानकर्ता एवं चिकित्सकहरुले अध्ययनका लागि लिना र उनको छोराको मुद्दामा धेरै चासो देखाएका थिए, तर भिक्टोरिया र तेवुरिलोले यसलाई अस्वीकार गरे ।
लिना अहिले ८७ वर्षको उमेरमा स्वस्थ जीवन बाँचिरहेकी छन् । जेराडो मेदिनाको बारेमा धेरै जानकारी बाहिर सार्वजनिक भएन । मेदिना परिवारले लिनाको अवस्था र घटनालाई सामान्य नै बनाउन खोजिरहे ।
# लिना मार्सेला
इजरायल र गाजाबीच भइरहेको हिंसाले युद्ध निम्त्याउन सक्ने खतरा
मोडर्नासँग दुई करोड ५० लाख डोज खोप खरिद गर्न अस्ट्रेलियाको सहमति
भारतमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट बारे पर्याप्त अनुसन्धान भएन
अमेरिकाको सिनेटमा कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेकाे प्रभाव बारे छलफल